DAAWO: Madaxwayne Xigeenka Maraykanka oo weerar ”duurxul” ah ku qaaday Ilhaan Cumar! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Madaxwayne Xigeenka Maraykanka oo weerar ”duurxul” ah ku qaaday Ilhaan Cumar!
DAAWO: Madaxwayne Xigeenka Maraykanka oo weerar ”duurxul” ah ku qaaday Ilhaan Cumar!
(Washington, DC) 26 Maarso 2019 – Madaxwayne Xigeenka Maraykanka ee Mike Pence ayaa khudbad uu ka jeedinayay ururka qalqaalada siyaasadda Yuhuudda ee dalka Maraykanka ee AIPAC e adeegsadey weerar uu ku qaado gabadha Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar.
Pence oo ah Jamhuuri kasoo gala gobolka Indiana, ayaa dhegeysatadii u sheegay in sida uu yiri Marayanka iyo Israel aysan kaliya xulufo ahayn, balse ay yihiin “mishpocha,” kaasoo ah erayga afka Yiddish-ka lagu yiraahdo “qoys.”
Pence, oo ah Masiixi Muxaafid ah, gaar ahaan mad’habta Evangelical-ka oo ku dhisan in si indho la’aan ah loo taageero Yuhuudda, ayaa weerar toos ah ku qaaday Ilhaan Cumar oo Aqalka Wakiillada ku metesha Minnesota, taasoo lagu eedeeyay ”Yuhuud nacayb”.
MX oo aan si toos ah u magac dhabin Ms Cumar ayaa jeediyay duurxul muuqda oo la garan karo ujeedkiisa isagoo sheegay in Aqalka Koongarayska soo galeen “dad daabulaya Saami nacayb joogto ah,” sida uu yiri, isagoo raaciyay “in Saami nacaybku aanu boos ku lahayn Koongarayska iyo guud ahaan Maraykanka,” jeer uu sacab qariyay warkiisa.
Pence ayaa sidoo kale soo jeediyay in hoggaanka Dimoqraadigu ay Ms Cumar ka saaraan Guddiga Arrimaha Dibedda Aqalka Wakiillada, taasoo ay jamaahiirtii shirka joogtey aad ugu riyaaqeen.
Aqalka Wakiillada, oo ay iminka aqlabi ka yihiin Dimoqraadigu, ayaa aad u cambaareeyay wax uu ku sheegay guud ahaan nacaybka Yuhuudda iyo Muslimiinta, waloow markii hore uu ujeedku ahaa tan hore.
Previous articleHoteellada qaaliga ah ee Xalane ku yaala dani ma ugu jirtaa xasiloonida caasimadda?
Next articleBeesha Caalamka oo taageertay hindise ay keentay DF Somalia (War saxaafadeed)